January 2014 ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
9:25:00 AM movies No comments
2013 မှာ ကျနော် အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကား ၁ ကားကို ရွေးပါဆိုရင်..
The Last Stand ကိုပဲ ရွေးမိမှာပါ..
ကျနော်တို့ ငယ်စဉ် ကတည်းက နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ မင်းသားကြီး အာနိုး
ကို အခုထိ နှစ်သက်နေဆဲပဲ ဆိုတာ The Last Stand ကြည့်မိတော့ ပိုပြီးသေချာသွားရတယ်..
မကြည့်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ..
Thriler လေးကြည့်ပြီး နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်
အောက်မှာ Full movies ကြည့်ရှုဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်.။
ကျနော့် ဆိုဒ်လေးရဲ့ facebook pages လေးမှာ Like လုပ်ပြီး အားပေးခဲ့ ပါအုန်းနော်...
လိုအပ်တာ လိုချင်တာ ရှိရင်လည်း comments မှာ ဖြစ်ဖြစ်
cbox မှာဖြစ်ဖြစ် ပြောခဲ့နိုင်ပါတယ်..။
tusfiles ကနေ download လုပ်နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်လိုက်ပါ..။
4:55:00 AM Android, software No comments
30 January 2014 အထိ Top ဖြစ်တဲ့
Android Apps & Themes Pack တွေကို တခါတည်း ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
ဒီထဲမှာ ပါတဲ့ APK အများစုဟာ Google play store မှာပိုက်ဆံပေးရတာတွေပါ..။
ဒီမှာ တော့ Free ရယူနိုင်ပါတယ်..။
ပါဝင်တဲ့ Android Apps & Themes Pack တွေကို အောက်မှာကြည့်ပါ..။
လိုအပ်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ..။
8:01:00 PM movies No comments
ဒီဇာတ်ကားကတော့ ၂၀၁၂ တုန်း Top ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားပါ..။
လာမဲ့နှစ် ၂၀၁၅ မှာ The Avengers2ဆက်ထွက်လာအုန်းမှာပါ..။
The Avengers ကို မကြည့်လိုက်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်
အခု ရက်တွေ လိုင်းမကောင်းလို့
download file အဖြစ်တင်မပေးနိုင် ဖြစ်နေတာ တောင်းပန်ပါတယ်..။
4:59:00 PM software, Windows 7, Windows 8 No comments
Version : 2014 v1.6
OS Support : Vista/7/8/8.1
Code File : k.a.ul.2014 v1.6
Why you should use this activator OS?
Ultimate 2014 is the most Simple & user-Friendly activator for Windows Vista, 7, 8, 8.1
7:32:00 AM movies 1 comment
Jackie Chan ရဲ့ 2013 မှာ နောက်ဆုံးထွက်ခဲ့တဲ့ Police Story (2013 )ပါ..
မကြည့်ရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်..
8:13:00 AM Android No comments
ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိဖုန်းနံပါတ်ကို တဖက်မှာ မပေါ်အောင်..
HiddenCall - hide your Number လုပ်ပေးမဲ့ (APK) လေးပါ..။
ဖုန်းသရဲ လုပ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နှစ်သက်မှာပါ..။
အသုံးပြုနည်းကို ဒီမှာ လေ့လာကြည့်ပါ..
လိုချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ...။
8:03:00 AM Android No comments
sticker အလန်းလေးတွေ လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အကြိုက်တွေ့စေမဲ့
Viber Camera & Sticker Pro (APK) လေးပါ...။
google play store မှာ ပိုက်ပိုက်ပေးမှ ရတဲ့ ကောင်လေးပါ..။
ဒီမှာတော့ Free ရယူနိုင်ပါတယ်..။
လိုချင်ရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ..။
7:40:00 AM Android No comments
Slideshow 365 .v3.3
မနေ့က မှ up date ထွက်တဲ့ Slideshow 365 APK လေးပါ..။
ဓါတ်ပုံလေးတွေကို သီချင်းလေးတွေ ထည့်ပြီး ကခုန်ခိုင်းဖို့ အတွက်ပါ..။
အသုံးပြုနည်း Videos လေးပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် အောက်မှ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
ကျနော့်ရဲ့ ချမ်းငြိမ်း- မှော်ဝန်း pages လေးကိုလည်း Like လုပ်ပြီး အားပေးကြပါအုန်းနော်..
အဆင်မပြေတာ တခုခု ရှိခဲ့ရင်လည်း comments မှာ ဖြစ်ဖြစ်
7:02:00 AM Tutorial No comments
ကျနော်အခုရေးမှာကတော့ ကျနော်ကို အတော်လေး ဒုက္ခပေးနေတဲ့ ပြသနာတခုဖြစ်တဲ့..
ဖုန်းနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ကြည့်လို့ မရ ဒေါင်းလို့မရတဲ့ ပြသနာပါ..။
အရင်ဆုံး ရုပ်ရှင်တွေကို ဖုန်းနဲ့ ကြည့်လို့ ရအောင် MX Player လေးကို ဒီမှာ ဒေါင်းယူပြီး ဖုန်းထဲထည့်ထားလိုက်ပါ....။
ကျနော် Pages ကနေပြီး The Four -2 ကိုကြည့်ကြရအောင်ဗျာ...။
အဲဒီကနေ ကျနော့် လင့်ကို ၀င်မယ်ဗျာ...။
အဲဒီမှာ Internet ကိုရွေးပြီး Just once ကိုရွေးပါ...။ဒီနေရာမှာ ကျနော်ပြထားတဲ့ အထဲက အတိုင်းဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်..။ Chrome တို့ IDM တို့ ထည့်မထားရင် Internet နဲ့ပဲ ကျနော့် ဆိုဒ်ထဲ တန်းရောက် သွားမှာပါ..။
အဲဒီမှာ Download ကိုရွေးလိုက်ပါ..။ အဲဒါဆိုရင် အောက်က ပုံအတိုင်းပေါ်နေပါလိမ့်မယ်..။
downloads Link ကိုရောက်ပါပြီ အဲဒီမှာ ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Use our download manager ဆိုတဲ့ ရှေ့က အမှန်ခြစ်လေးကို ဖြုတ်ပြီး Download ကိုနှိပ်လိုက်ရင် အောက်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ်မယ်..။
အဲဒီမှာ MX Player ကိုရွေးပြီး ကြည့်နိုင်သလို
IDM or Internet ကိုရွေးပြီးတော့လည်း ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်..။
ဒါကတော့ MX Player ရွေးပြီးကြည့်တာပါ.. ။
ဒီလောက်ဆို အဆင်ပြေမယ် မျော်လင့်ပါတယ်..။
6:08:00 AM Android, Player No comments
သူကတော့ ကျနော်တို့ Android ဖုန်းတွေကနေ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ နေရာမှာ
ဘယ် media formatt မျိုးကိုမဆို ဒီကောင်လေးနဲ့
အဆင်ပြေပြေ ကြည့်လို့ ရနိုင်ပါတယ်..။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာ ၀ါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်တွေ အနေနဲ့
5:18:00 AM Android No comments
မနေ့က မှ up date ထွက်တဲ့ Vibar version အသစ်လေးပါ..
သူ့မှာ ထူးထူးခြားခြား ပါဝင်လာတာကတော့...
အများမျော်လင့်နေကြတဲ့ Block list လေးပါ..။
viber ကနေ အာရုံနောက်တဲ့ ပြသနာကို ကာကွယ်နိုင်ပါပြီ..။
အသုံးပြု ပုံကတော့ ..
အရင်ဆုံး setting ကိုဝင်လိုက်ပါ..
setting ကနေ privacy ကိုဝင်ပါ..။
အဲဒီကနေ Block List ကို ၀င်ပါ..။
အဲဒီလို ပေါ်လာတဲ့ရင် ကိုယ်အတွက် အာရုံနောက်စေတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေး ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ..
အဲဒါဆိုရင် Viber ကြောင့် အာရုံနောက်တဲ့ ပြသနာ ဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ..
အောက်မှ နောက်ဆုံးထွက် Viber 4.2.0 ကို ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်...။
4:46:00 PM Tutorial No comments
windows 8 ရဲ့ login password ကို ဖြုတ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ..
အရင်ဆုံး ..Start menu > Run box ( Win + R )ကို နှိပ်ပါ...
ကျလာတဲ့ box ထဲမှာ netplwiz ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ...။
အောက်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..။
အဲဒီထဲကနေ ကိုယ်ဖြုတ်ချင်တာကို ရွေးပြီး Remove > Apply > ok..
ဒါမှမဟုတ် Reset password > Apply > ok...
1:11:00 AM movies No comments
Stars:Chao Deng, Yifei Liu, Anthony Wong Chau-Sang
စကားပြီး ၊ စကား ။ စပါးပြီး ၊ စပါး ။ မယားပြီး ၊ မယား ဆိုသလို..
ကျနော် ဘလော့ လေးမှာ ရုပ်ရှင်ပြီး ၊ ရုပ်ရှင် ဖြစ်နေပါတော့တယ်..။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ရုပ်ရှင်ကို နှစ်သက်သလို ရုပ်ရှင်နှစ်သက်တဲ့ ၀ါသနာတူ သူငယ်ချင်းတွေကလည်းတောင်းဆိုနေတာမို့ ရုပ်ရှင်ပဲ ထက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
ဒီကားကတော့ တော်တော်များများတာင်းဆိုနေတဲ့ The Four -2ပါပဲ..။
2013 11လပိုင်းမှာရုံတင်ခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်ကားမှာ
မြန်မာ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အသဲစွဲ Liu Yifei ကြောင့်ပဲ ဒီဇာတ်ကားကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားနေကြတာအသေအချာပါပဲ..။
ဒီကားက နံပါတ်တစ်ထက် ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ ပိုများပါတယ်...။
4:52:00 PM software No comments
Language: English, and other
Operating system: Windows ? XP, Windows Vista ?, Windows ? 7, Windows ? 8,
Windows ? 8.1.
Description: Ashampoo Burning Studio 2014 - A new version of the program for recording CD-RW, DVD-RW, DVD RW and Blu-ray discs last line of the package. The utility allows you to create projects and record CD / DVD (including MP3-CD, VCD, S-VCD and Blu-ray). The program supports long filenames (127 characters for DVD and Blu-ray and 64 for CD), automatic configuration settings, saving and loading project, the creation of images,asimple file management with DragandDrop and more. Works with most recording devices. Never before has it been so easy to convert your files to DVD discs that can be played on any DVD-player.
The Lord of the Rings- The Two Towers + The Return of the King (မြန်မာစာတန်းထိုး)
3:26:00 AM movies, မြန်မာစာတန်းထိုး ရုပ်ရှင် 1 comment
ဆူးခင်းလမ်း သုတရသ က ကျနော် သူငယ်ချင်းက
The Lord of the Rings မြန်မာ စာတန်းထိုး
တင်ပေးပါဆိုလို့ သူ့မှာရှိတဲ့ မြန်မာ စာတန်းထိုး ၃ တွဲထဲက
ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးတဲ့ အတွက် တင်ရတာလက်ဝင်တာမို့ နောက်ကျသွားတာကို ဆူးခင်းလမ်း သုတရသ ကသူငယ်ချင်းတွေကို တောင်းပန်ပါတယ်..
english subtitles နဲ့ ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်လည်း
comments မှာ ဖြစ်ဖြစ် cbox မှာဖြစ်ဖြစ် ပြောခဲ့ပါ..
facebook pages လေးမှာ Like လုပ်ပြီး အားပေးခဲ့ ကြပါအုန်းနော်...
4:37:00 PM Tutorial No comments
USB အပါအ၀င် Drives တွေကို software မပါပဲ lock ချတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ..။
မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်..။
အားလုံး လွယ်ကူရှင်းလင်းအောင် ပုံတွေနဲ့ အသေးစိတ် နည်းလမ်းတွေကို
အရင်ဆုံး control panel ကို သွားလိုက်ပါ..။
Bitlocker Drive Encryption ကို click လိုက်ပါ..။
ကျလာတဲ့ အထဲက ကိုယ် lock ချထားချင်တဲ့ drives ကိုရွေးလိုက်ပါ..။
ကျနော်ကတော့ pendrive ကို ရွေးထားပါ..။
ဘယ် drives ပဲ ဖြစ်ဖြစ် နည်းလမ်းကတော့ အတူတူပါပဲ..။
မြှားပြထားတဲ့နေရာက Turn Bitlocker on ကို click လိုက်ပါ..။
useapassword to unlock drive မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Enter your password မှာ password ပေးလိုက်ပါ ..။Re-Enter your password မှာလည်း အပေါ်မှာ ပေးထားတဲ့ အတိုင်း ထက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ..။ ပြီးရင် Next ကို click ပြီး ဆက်သွားလိုက်ပါ..။
အဲဒီမှာ ကြိုက်တာ ရွေးလို့ ရပါတယ်..။ကျနော်ကတော့ save toafile ကိုရွေးပြထားတယ်..။
အခုလို file save ဖို့ကျလာရင် ကိုယ့်စက်ထဲက ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ save လုပ်နိုင်ပါတယ်..။
ဒီနေရာမှာလည်း ကျနော်က Encrypt used disk space only ကိုရွေးပြထားပါတယ်..။
ပြီးရင် Next ကို click ပေါ့...။
ဒီလိုကျလာရင် Start Encryption ကို click လိုက်ပါ..။
ဒီနေရာမှာ ခဏတော့ စောင့်ရပါတယ်..။100% ပြည့်ရင်
ကိုယ့်ရဲ့ drive လေးကို ဆော့ဝဲမပါပဲ lock လို့ ရသွားပါပြီ..။
အဲဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ USB drive လေးအခုလို lock ကျနေတာ တွေ့ရပါမယ်..။
အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် ..အဲဒီ lock ကျနေတဲ့ drive အပေါ် click လိုက်ရင်...
အခုလို password ဖြည့်ဖို့ ကျလာတဲ့ box လေးထဲမှာ
ကိုယ်ပေးထားတဲ့ password ရိုက်ထည့်ပြီး Unlock ကို click ယုံပါပဲ..။
ဒီလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ် မျော်လင့်ပါတယ်..။